musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Pelican Zvigadzirwa kuti zviwanikwe nePlatinum Equity
Platinum Equity yazivisa nhasi kusaina kwechibvumirano chakasimba chekutora Pelican Zvigadzirwa, mutungamiri wepasirese mukugadzirwa uye kugadzirwa kwemakesi-ekudzivirira makesi uye giya rakaomarara revanyanzvi uye vanofarira vekunze, uye tembiricha-inodzorwa yekupa cheni mhinduro kune yehutano indasitiri.
Mazwi emari haana kuburitswa. Chiitiko ichi chinotarisirwa kuzadzikiswa panopera kota yechina ya2021.
Pelican inoshanda muzvikamu zviviri zvekutanga: Pelican Zvigadzirwa dhizaini uye inogadzira yakakwira-inoshanda yakasimba yekudzivirira makesi, epamberi anotakurika mwenje masisitimu, uye zvigadzirwa zvekunze zvevatengi zvehurumende dzakashinga zvikuru, misika yekutengesa neyevatengi. Peli BioThermal inopa yakazara portfolio yemapashure tembiricha-inodzorwa mapasuru mhinduro kune akakwira-ekukura emakiriniki miedzo uye yekutengesa biopharma misika.
"Kwemakore anodarika makumi mana nemashanu Pelican yakavaka zita rine simba rine mukurumbira wakawanikwa pakati pevatengi vayo vanodzvinyirira uye vakavimbika nekugadzira zvimwe zvigadzirwa zvisingaparadze pasi rose," akadaro Platinum Equity Partner Jacob Kotzubei. "Takazvipira kuvaka pane yakapfuma nhaka yekambani nekudyara mukuenderera mberi kwehunyanzvi."
Inotungamirwa muTorrance, CA, Pelican inochengetedza gumi nembiri nzvimbo dzekugadzira, 12 nzvimbo dzekushandira uye nhepfenyuro yenetiweki, uye makumi maviri nematatu emahofisi ekutengesa epasi rese munyika makumi maviri neshanu.
"Nesimba rekugadzira pasi rese uye nhepfenyuro yekuparadzira, Pelican ipuratifomu yakasarudzika yekukura kwekuwana mukana wakakura mumisika yayo yepakati uye nezvikamu zviri pedyo," akadaro Platinum Equity Managing Director Matthew Louie. "Tinotarisira kushanda nekambani manejimendi yekambani uye kuisa zviwanikwa zvedu neM & A mukutsigira chikamu chinotevera chekukura nekuwedzera kwePelican."
Mukuru wePelican Phil Gyori anoenderera mberi achitungamira kambani zvichitevera kutengwa.
"Sezvatinofambira mberi nerutsigiro rwePlatinum Equity, ndine chivimbo chekuti nzira yePelican yekukura icharamba yakasimba, uye zvigadzirwa zvedu nemasevhisi zvichawedzera kuzadzikisa zvinodiwa nevatengi vedu vakasiyana," vakadaro VaGyori. "Ndinotarisira kukwidziridza maoko edu, kushanda pamwe nechikwata chine ruzivo chePlatinum, nekugadzira chitsauko chitsva chinonakidza munyaya yePelican."
Gibson Dunn & Crutcher LLP iri kupa gweta repamutemo uye Willkie Farr & Gallagher LLP iri kupa gweta rekubhadhara chikwereti kuPlatinum Equity pakutenga kwePelican. BofA Chengetedzo ndiye anotungamira kunyora pasi kune chikwereti mari.
Kiredhiti Suisse akashanda semubatsiri wezvemari akasarudzika uye Latham & Watkins LLP yakashanda segweta repamutemo kuPelican Zvigadzirwa.